Iyo iri nyore nzira yekutanga chirongwa mukati Windows 10 kunyora zita rayo muKutanga / taskbar yekutsvaga uye tinya Enter Enter. Asi kana iwe uchida kuzviita nekukurumidza, ipa tsika keyboard shortcuts kune ako aunofarira zvirongwa uye maapp.
Nekupa yakatsaurwa keyboard pfupi, iwe unozokwanisa kuvhura ako aunofarira mapurogiramu pasina kuvhura iyo Kutanga / taskbar yekutsvaga.
Luckily, Windows 10 inopa nzira yekupa mapfupi ekhibhodi kutanga zvirongwa. Ndokunge, iwe unogona kugadzira zvidzitiro zvekhibhodi zvechero zvechinyakare desktop desktop pamwe nemaapplication akaiswa kubva muChitoro. Iwe haudi yechitatu-bato software yebasa racho.
Zvisinei, pane kubata kudiki. Iyo yekudimbudzira nzira yekubatanidza inofanirwa kunge iri Ctrl + Alt + nhamba / tsamba / kiyi yekushanda kana Shift + Alt + tsamba / nhamba / kiyi yekuita. Iwe haugone kugovera mapfupi maviri etsamba akadai seCtrl + T kana Alt + T. Kana uchida kudaro, unofanirwa kushandisa chirongwa chechitatu-bato chinonzi WinHotKey.
Tip: Iwe unogona zvakare kupinza ako aunofarira zvirongwa kubha rebasa kuti uwane nekukurumidza. Zvirongwa zvakanamirwa kubha rebasa zvinogona zvakare kuvhurwa na Windows logo + 1/2 /… .. kudimbudzira kwekhibhodi.
Heano maitiro ekugadzira nzira pfupi yekhibhodi kuvhura chirongwa kana chirongwa mukati Windows 10.
Gadzira nzira pfupi yekhibhodi yezvirongwa zve desktop mukati Windows 10
Kana iwe uchida kugadzira nzira pfupi yekhibhodi yeapp, ndapota tarisa kunongedzo muMethod 2 (skira pasi pasi kuti uone).
Step 1: Nhanho yekutanga ndeyekugadzira nzira pfupi yedesktop yechirongwa icho iwe chaunoshuvira kuvhura neiyi nzira pfupi yekhibhodi. Muchirongwa ichi, tiri kugadzira nzira pfupi yekhibhodi ye browser yeFirefox.
Kuti uite izvozvo, tsvaga chirongwa muKutanga / taskbar yekutsvaga bhokisi, kurudyi pane chirongwa mune yekutsvaga mhedzisiro wobva wadzvanya iyo Vhura nzvimbo yefaira kuita.
Step 2: Kudzvanya iyo Vhura faira nzvimbo sarudzo ichaunza iyo Kutanga menyu Zvirongwa forodha. Pano, kurudyi pane chirongwa (icho chaunoda kugadzira nzira pfupi yekhibhodi), tinya Tumira kune uye ipapo chengeta Desktop (ita zvishoma).
Iwe unozove uine icon yechirongwa pane iyo Desktop.
Step 3: Kungofa pane desktop icon yechirongwa uye tinya Properties.
Step 4: Mubhokisi re dialog rinoguma, ita shuwa kuti uri mu Shortcuts Tab. Kana zvisiri, chinja kune zvakafanana nekudzvanya iyo Yekukurumidza nzira.
Step 5: Pakupedzisira, sarudza iyo Shortcut kiyi munda. Dhinda chero kiyi iwe yaungade kushandisa iyo chirongwa kana iyo app.
Cherechedza kuti Windows zvinongoerekana zvawedzera Ctrl + Alt sechirevo chekutanga. Ndokunge, semuenzaniso, kana iwe ukadzvanya iyo E kiyi, Ctrl + Alt ichawedzerwa otomatiki seyakagadzika. Saka, iyo pfupi nzira yekhibhodi zvino yava Ctrl + Alt + E.
Cherechedza kuti Windows 10 haikubvumire iwe kushandisa kiyi yekufupisa yekhibhodi iyo yatove kushandiswa.
Step 6: Click on Shandisa bhatani.
Gadzira nzira pfupi yekhibhodi yemapurogiramu mu Windows 10
Iwe unofanirwa kutevera maitiro akati siyanei kuti ugadzire nzira pfupi yedesktop yezvibasa. Zvisinei, heino nzira yekuzviita nayo.
Step 1: Tsvaga iyo app iyo iwe yaunoda kuti ugadzire keyboard pfupi, kurudyi pamusoro payo uye ipapo bhura Pin kuti Kutanga sarudzo yekuisa iyo app kuKutanga.
Step 2: Dhonza uye udonhedze iyo ichangowedzerwa nzira yekutsvagisa yeapp kubva kuKutanga menyu kuenda kudesktop nzvimbo kuti ugadzire nzira yayo pfupi pane Desktop.
Step 3: Kubva pano, tevedzera rairo kubva Step 3 to 6 yeMethod 1 (scroll kumusoro kuti utarise) ku shandisa nzira pfupi yekhibhodi kuti utange iyo app.
Method 3 ye3
Shandisa WinHotKey kugadzira tsika yekhibhodi kutanga zvirongwa
WinHotKey idiki (yemahara) yekushandisa yakagadzirirwa kubatsira Windows vashandisi vanogovera hotkeys kutanga maapplication, mafaera, uye maforodha.
Heano maitiro ekuishandisa iyo kupa nzira yekhibhodi kutangisa chirongwa:
Step 1: Tora iyo WinHotKey kubva peji ino uye kuisa paPC yako.
Step 2: Paunongotanga, tinya pane iyo New Hotkey kuita.
Step 3: Mune dialog inoguma, nyora rondedzero yeiyo hotkey (sarudzo kunyange), sarudza iyo kiyi yekubatanidza iyo yaungade kushandisa, sarudza Vhura chishandiso kubva ku "Ndiri kuda WinHotKey ku" inodonhedza menyu, tarisa kune chirongwa icho iwe unoda kuvhura neiyi pfupi nzira yekhibhodi, wobva wadzvanya iyo OK bhatani. Ndizvozvo!
sei vhara pasi kana hibernate Windows 10 ine nzira pfupi yekhibhodi mutungamiri anogona kukufarirawo.
Maitiro Ekugadzira Yekhibhodi Shortcut Kuvhura Calculator Mune Windows 10